Business Protection: How to protect your business from crooked employees - နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ဥပဒေခိုင်မြဲသော - Lawyers in Nigeria.
ဘတ်: 10 သင်၏လုပ်ငန်းဖူးသငျ့ပါအရေးကြီးဥပဒေရေးရာစာရွက်စာတမ်းများ
ဖတ်ရန်: Why You and Your Business Need Legal Advice
Your business confidential information can be anything from the business plan, အခြေခံစစ်တမ်းဒေတာ, ဘဏ္ဍာရေးမှတ်တမ်းများ, စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်, ကုန်သွယ်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်များ, client/customer database, details of pricing structures, tendering strategies, စသည်တို့ကို.
ဖတ်ရန်: Steps to follow to recovering money fromadebtor
This article is for general informational purposes only and notasubstitute for legal guidance. If you want to protect your business with the necessary legal documentation; or you are concerned about employment obligations; employees’ claims; compliance with the law; dispute settlement; စသည်တို့ကို; you should seek proper legal advice and help fromalegal practitioner. To get started, schedule in-office consultations at +2348187019206, +2348039795959 | အီးမေးလ်ပို့ရန်: lexartifexllp@lexartifexllp.com | ဝက်ဘ်ဆိုက်: www.lexartifexllp.com.
© Copyright သတိပေးချက်!
The permission given to freely copy this article is only on the condition that LEX ARTIFEX LLP is referenced and duly acknowledged as the Author using the following format: “This article was written by Lex Artifex LLP ရဲ့ကုန်သွယ်ရေး & ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံပေး Group မှ. မှာမူရင်းဆောင်းပါး View http://lexartifexllp.com/business-protection/". မည်သည့်မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုသက်ဆိုင်သောဥပဒေအရအပြစ်ပေးရကြလိမ့်မည်သတိပြုပါ.
← စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်အရေးပါမှု:9သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ရန်သင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်အကြောင်းပြချက်တွေ